आजको राशिफल ( वि. सं. २०७८ श्रावण २२ गते, शुक्रबार) - Rastrakokhabar
आजको राशिफल ( वि. सं. २०७८ श्रावण २२ गते, शुक्रबार)
नयाँ अवसरका साथै आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन्। श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ। पढाइमा ध्यान केन्द्रित हुनाले प्रगति हुनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। व्यापारमा पनि राम्रै नाफा उठाउन सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा छोटो समयमै काम बनाउने समय छ। नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। आम्दानी बढ्नाले दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ।
अवसर आए पनि काम बनाउन केही समय लाग्नेछ। आश्वासन बाँड्नेहरूले व्यवहारमा झुक्याउन सक्छन्। महत्त्वाकांक्षी योजना गोप्य राख्नुहोला। स्वयं योजना बनाएर अघि बढ्दा फाइदा हुनेछ। बलजफ्तीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जाेगिएर काम लिनु फाइदाजनक हुनेछ।